Firenena tsy misy Visa ho an'i Afghanistan - ALinks
Firy ny firenena manana fidirana maimaimpoana ho an'ny pasipaoro any Afghanistan?
Araka ny Index Henley Passport, ny olom-pirenena Afghana dia nahazo fidirana maimaimpoana na visa-tonga amin'ny firenena sy faritany 26 hatramin'ny 5 aprily 2020, nametraka ny pasipaoro Afgàna faha 110 ary ratsy indrindra manerantany.
Ireo manana pasipaoro afgàna dia afaka mitsidika firenena dimy tsy misy visa. Svalbard, Micronesia, Dominica, Saint Vincent, ary ny Grenadines dia ao amin'ny firenena ambony.
Tsy misy Visa / Visa-tonga
Bangladesy Mety hahazo visa amin'ny fahatongavanao hijanona mandritra ny 30 andro
British Virgin Islands Visa rehefa tonga mandritra ny 1 volana.
Cape Verde Visa amin'ny fahatongavany mandritra ny 90 andro.
Comores Visa amin'ny fahatongavany
Nosy Cook 31 andro.
Djibouti Visa amin'ny fahatongavany
Dominica Hatramin'ny 6 volana.
Grenady Visa ilaina.
Haiti 3 volana
Madagasikara Visa amin'ny fahatongavany. 90 andro, 30 andro maimaimpoana.
Maldives 30 andro miaraka amin'ny mety fanitarana.
Maoritania Visa rehefa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Nouakchott.
Mikrônezia 30 andro.
Mozambika Visa amin'ny fahatongavany mandritra ny 30 andro.
Niue 30 andro.
Palau Visa amin'ny fahatongavany mandritra ny 30 andro.
Saint Vincent sy ny Grenadines 1-6 volana.
Samoa 60 andro.
Seychelles 3 volana.
Timor-Leste Visa amin'ny fahatongavany mandritra ny 30 andro.
Togo Visa amin'ny fahatongavany 7 andro, manitatra hatramin'ny 90 andro
Tuvalu Visa rehefa tonga mandritra ny 1 volana.
Oganda Visa 3 volana amin'ny fahatongavanao. misy eVisa.
Fanomezana alalana elektronika
Benin Misy visa elektronika mandritra ny 30 andro (tokana sy maromaro) ary 90 andro (maromaro).
Gabon e-Visa 72 ora alohan'ny fahatongavanao
Lesotho Ny visa elektronika dia voahodina ao anatin'ny 72 ora.
Qatar Visa an-tserasera hatramin'ny 30 andro.
Saint Kitts sy Nevis 30 andro. $ 100
Zambia E-Visa misy
Zimbaboe E-Visa misy
firenena afaka visa ho an'i Afghanistan
Amboary ny nofinao. Mitadiava asa any Aostralia !!
Visa mankany Torkia ho an'ny Arabo Saodiana, torolàlana fohy
Aprily 11, 2021
Famarotana tsara indrindra hitsidika ao Paris
Mangataha Visa Bulgaria
Toerana tsara indrindra hitoerana ao Palestine